Land for Sale in Dagon Myothit (North) - Yangon Region | iMyanmarHouse.com
From 300 Lakhs To 1000 Lakhs Lands for Sale in Dagon Myothit (North)
Lands for Sale in Dagon Myothit (North)
Ad Number S-8206200
ရနျကုနျမွို့ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​မွောကျဒဂုံမွို့နယျ(၂၈)ရပျကှကျ ၄၀ပေ၆၀အကယျြအဝနျးရှိသော ​...
Ad Number S-8195711
Ad Number S-8195648
ရနျကုနျမွို့ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​မွောကျဒဂုံမွို့နယျ(39)ရပျကှကျ ၄၀ပေ၆၀အကယျြအဝနျးရှိသော ​...
Ad Number S-8195409
၄၃၊ဘုရင့်နောင်လမ်းနီးနီး အ၀င်အထွက်သာသာမှာ ဈေးသက်သက်သာသာနဲ့ မြေကွက်ရပါမယ်ရှင်...။
09 96 338 22 55/09-889 555 699
Ad Number S-8194713
(၄၁)မှာ ဦးဝိစာရနီးမှာ နေရာကောင်းရှာနေကြတဲ့ အမျိူးတွေအတွက်ပါရှင်..။
Ad Number S-8194688
မြောက်ဒဂုံ..၊ ၃၂ ရပ်ကွက်..၊ ဘုရင့်နောင်လမ်းမအနီး..၊ လမ်းသွယ်..၊ထောင့်ကွက်၊...
Ad Number S-8194610
Ad Number S-8190006
ရန်ကုန်မြို့ ​​ ​​မြောက်ဒဂုံမြို့နယ်(၄၇)ရပ်ကွက်တွင် ပေ၄၀ပေ၆၀အကျယ်အဝန်းရှိသော...
Ad Number S-8189979
မွောကျဒဂုံမွို့နယျ ၃၉ ရပျကှကျ မန်တလေးလမျးကြောကပျ အရှလှေ့ညျ့​မွကှေကျရောငျးမညျ
Ad Number S-8189006